I-Master in Planning Territorial ye-UNAH - Geofumadas
Master of Management Planning and Land ezinikezelwa yi-National Ukuzilawula University of Honduras (UNAH), yinkqubo yezemfundo ukususela ekuqalweni kwayo e 2005, iye ukuphuhlisa ngokuhlangeneyo neSebe iJografi kwiYunivesithi yaseAlcalá (Spain) . Kuba umbuzo, kwanawezayo kuthi, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, wathabatha thuba ukwazisa kwiziseko malunga nale kwabeyisayo, nangona loo 2013 ekuqaleni antywiliselwa kwinkqubo Self-Assessment Career kunye nokuhlaziya Inkqubo Academic eziya umkhwetha promotion entsha yee 2013. Kwakhona ndiyathemba ukuba unako ukukhonza njengegalelo kwenye iyunivesithi ukuba izicwangciso ukuze anikele inkonzo efanayo.
Le nkqubo ixhaswa yi-Faculty of Sciences Spatial (ubuso / UNAH) kunye neSebe ISebe leJografi kwiYunivesithi yaseAlcalá (Spain), kunye noqhelaniso iingcali eyunivesithi ngolwazi kunye / okanye amava kulawulo lizwe, ezidolophini kunye kwizicwangciso zokuguqula iimeko emaphandleni, ulawulo yendalo kwemithombo, ukusetyenziswa ngolondolozo komhlaba, kunye nokusetyenziswa kwedatha lwendawo satellite imifanekiso isekude.
Umgqwesi weMatriki kaMlawuli kwi: UCwangciso loPhuhliso kunye noLawulo loLuntu, ngumqeqeshi oqeqeshelwa uqeqesho olukhethekileyo kwiSiseko seSayensi kunye neThekhnoloji.
Ungumqeqeshi onokusebenza njengoMlawuli, uMphathi okanye uMlawuli weNkqubo yoLwazi lweNdawo.
Ungumqeqeshi osebenzisa ulwazi lwakhe ngendlela yokuzimelela kunye neendlela eziphathekayo kwiimeko zokulawula, ukulawulwa komhlaba, kunye nokukwazi ukuphuhlisa nokuphuhlisa izicwangciso eziphambili, iiprojekthi ezizodwa, kunye neendawo ezisisiseko, i-cadastral, imephu kunye neendawo zokucwangcisa zezikali zendawo, kamasipala, wengingqi kunye nelizwe ukwenzela ukulungiswa kommandla.
Uya kuba nako ukuyila, ukulawula nokuqonda ukusetyenziswa kwezixhobo ezahlukeneyo ze-geodetic kunye nezixhobo zeekhomputha kunye nesofthiwe ye-acquisition, management, processing and analysis of data geospatial.
Ungumqeqeshi onesimo sengqondo sokuqeqeshwa okuqhubekayo, ukuhlaziya ulwazi lwakhe kunye nokufumanisa olutsha olwenzekayo kwintsimi kunye neendlela ezintsha zokufumana, ukutolika nokuhlalutya kwedatha ye-geospatial.
Ubungcali beCandelo leeMatriki liya kuqonda uxanduva lokukhusela ukuthembeka kwedatha yegosati ephathwayo kwintsimi yabo.
Iprogram ye-Master iquka izifundo ze-19 ezihanjiswe kule mijikelezo elandelayo ye-7:
I-Ciclo1: IJografi kunye neeNkcazo zoMbutho weSithili
I-CTE-501 Geography kunye noCwangciso loMhlaba
I-CTE-502 Iimfuno zoLawulo loMhlaba
I-2 Cycle: i-Geodesy ne-Cartography
I-CTE-511 Iimpawu ezisemgangathweni zeGeody and Cartography
I-CTE-512 Iifotogrammetry kunye ne-Global Ge Geing Systems
I-CTE-513 Iimephu: Ukuyila, ukuBumba, ukuCwangciswa nokuPrinta
I-CTE-514 i-Atlas ye-elektroniki kunye nokupapashwa kweMaphu kwi-Web
I-3 Cycle: IiNkqubo zoLwazi lweNdawo
I-CTE-521 Isiseko seNkqubo zoLwazi lweGaographic
Inkqubo ye-CTE-522 yeGraographic Information System
I-CTE-523 System Information System - Vector
I-CTE-524 Programming isetyenziswe kwi-Geographical Information Systems environment
Umjikelo we-4: Ukubonwa kude
I-CTE-531 Imigaqo yePhysical Feelings of Sensing
Ii-Platforms ze-CTE-532, ii-sensors kunye ne-Hyperspectral Remote Feelings
I-CTE-533 Ukuchazwa kweZithombe
ICTE-534 Digital Processing Processing kunye nokutolika
Umjikelezo we-5: UCwangciso loThutho
ICTE-541 Territory Administration - Izicelo
CTE-542 Planning Territorial - Izicelo
Ulawulo lwe-CTE-543 Territorial Management - Izicelo
I-6 Cycle: I-Practice Practice
I-CTE-600 Professional Practice isetyenziswe kwiCandelo loPhuhliso
I-7 Cycle: Iprojekthi eyiNtloko
Iprojekthi yophando ye-CTE-700 (i-Thesis).
I-Master's Degree iphuhliswe kwimodi yamagumbi okufundela, okubandakanya:
· Iiklasi ezintle (kwi-line): Ngabantu abafunda isifundo ngasinye kwi-intanethi, malunga neveki ezine, kwi-platform ye-teknoloji eyiyo (Moodle). Zihamba kunye nomfundisi; owongeziweyo uya kunika iingxelo zebhaloliyo.
· Iiklasi: Kwabafundi ngasinye besikolo baye kwiiklasi ezijongene nobuso ezivela kwi-8: 00 ukuya kwi-17: iiyure ze-00, ukususela ngoMvulo ukuya kuMgqibelo (iiyure ze-48 zizonke).
· Imisebenzi encedisayo neyongezelelweyo: Bobabini kwigumbi lokufundela kunye neeklasi eziqhelekileyo abafundi bakhula imisebenzi ebonakalayo. Abafundi bane-script yale mi sebenzi, kunye nemifanekiso yesathelayithi, imifanekiso yezithuthi kunye nezinye iinkcukacha ezivela kwi-SIG-FACES / UNAH. Ukongezelela, baqhuba imisebenzi kunye neeprojekthi kwisebe loomasipala baseHonduras, ukuze kuzuze ukubunjwa kwabo kunye nabemi basekuhlaleni.
Uphando: Umfundi wenza uphando lwenzululwazi lwangaphambili olwalathathwe nguNjingalwazi weThunywa, enenjongo yokufaka isandla kwiindalo kunye / okanye ukuchazwa kwezicombululo ezicetywayo kwiingxaki zelizwe kunye / okanye zengingqi, kwaye kugqityiwe nokulungiselela, ukukhusela nokuvunyelwa kwe-Thesis weDanga.
Post edlulileyo«Edlulileyo IQonga leMerika yaseMatriki ngeeMpawu eziphawulekayo zokungenelela kwimizi
Post Next Izifundo zeCadastre ze-2 ezikhuthazwa yi-OASOkulandelayo "
Iimpendulo ze-5 kwi- "Master in Planning Territorial of UNAH"
Iveth Leret uthi:
I Iveth Levoyer of Ecuador, mna ndinomdla nineNkosi ngokwemigaqo umsebenzi wam mna esiphambili kunye Planner Territorial injineli izidanga ukusuka Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, leyo ufuna yona a inkosi ngokuphathelele umsebenzi wam kodwa intanethi, ukuba ndiya kukunceda ngayo Ndiyayixabisa ngokwenene ...
Isicwangciso senkosi ekhoyo ngoku ifuna ukuba iveki ubuso ngobuso kwiklasi nganye. Phantse kuzo zonke iiveki ezintlanu, kuyimfuneko ukuya kwiklasi ukusuka kwi-8 AM ukuya kwi-5 PM ukusukela ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo. Oku, kuba uninzi lwabasoprofessi luvela ngaphandle kwelizwe; ukuya ekhosini ekuqaleni kweklasi ngokwakho uze ulandele eqongeni.
Jorge Alejandro Valle uthi:
Andizange ndiyiqonde ukuba yeyiphi iishedyuli. Zingaphi iiyure zeklasi ngosuku?
Ihlala iminyaka emibini. Okwangoku, ukunyuselwa kwesine kuyaqala, ikhosi yonyango kunye nokukhethwa kwabagqithileyo kudlulile. Ngoku kuya kufuneka ulinde ukunyuswa okulandelayo ukuqala, kunokwenzeka kwi-2016.
julian vallecillo uthi:
Lide kangakanani inqanaba le-master kwaye liyintoni iindleko zalo, nceda ndithumele ulwazi kum nge-imeyile. Ndingayithanda kakhulu ngoba ndiyayithanda UNAH